WCB ဒီဇိုင်းအေဂျင်စီ | ရွှေ Web ကိုဆုပေးပွဲ
အားဖြင့် ဂွ | ဇန်နဝါရီ 21, 2019 | ဆုချီးမြှင့် Winners |0မှတ်ချက်များ
ကျနော်တို့ site ကိုတလျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကော်ပိုရိတ်ခံစား၏ထို့အပြင်နှင့်အတူရှိပြီးသား WordPress ကိုဆောင်ပုဒ်စိတ်ကြိုက်နှင့်အဆင်ပြေအောင်. က Zurb အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုအသုံးပြုသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အထူးဒီဆောင်ပုဒ်ကို ရွေးချယ်..
အတူအလုပ်လုပ်မှပျော်စရာ Is ဒါကဘန်ကောက်မြို့တစ်ဦးကကောင်းပြီတည်ထောင်အေဂျင်စီ
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးက Web ဒီဇိုင်းကျောင်းမှာအဖြစ်စတင်အနေနဲ့ဆုရဒီဇိုင်းအေဂျင်စီသို့ကြီးပြင်း. ကျနော်တို့သေချာကြီးမြတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတည်ဆောက်ဒါပေမယ့်ငါတို့အထူးစေသည်ကြောင်းကိုသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားကူညီပုံ.